Wax Badan Ka Baro Sababaha Keena Madowga Indhaha Hoostooda Iyo Siyaabaha Looga Takhaluso - Daryeel Magazine
Dabcan waad necebtahay madowga indhaha hoostooda kasoo baxo, hadaba ogow waxa sababa.
Maku dhibaan madowga iyo haraaha kasoo muuqda indhaha hoostooda (dark circles under the eyes). Haraaha indhaha ayaa ku ekeysiiya qof weyn oo da’daada mid ka weyn ka muuqato, sidoo kale waxey ku ekeysiyan inaad rafaadsantahay oo aadan nasniino kugu filan aadan helin ama xanuunsantahay ama aad si xun u daalantahay.
Hadaba, hadaad ka mid tahay dadka zaa’idka u dhibsada modowga indhaha heeraartooda kasoo baxa, waxan kusoo aruurinay siyaabo sahlan oo aad iskaga dhimi karto ama iskaga dhameyn karto gabi ahaan.
Ogaanshaha waxa sababaya iyo ka hortagidooda:
Hurdo kugu filan seexo. Hurdo la’aanta ayaa badana ugu wacan waxa sababa haraaha indhaha.
Go’aanso inta saacadood aad u baahantahay inaad hurudid (caadi ahaan awaa 7-9 saacadood habeen kasta. tasoo ku xiran da’daada iyo xaalada aad ku sugantahay).
Maadooyinka maandooriyasha iyo sigaaraka ayaa si xun u saameeya hurdada.
Qaado vitamin kugu caawiyo inaad heshid hurdo kugu filan.
Xasaasiyada ayaa ayan ka mid ah waxyaabaha sababa is badalka jirkaga midabkisa siiba indhaha hoostooda iyo wajiga qaar. Hadaad xasaasiyad qabtid iska daaweey, sidan waxad u sameyn kartaa adoo ka hortaga xasaasiyada aad qabtid waliba hadey tahay mid xili gaar ah kugu dhacda sida qabowaha ama xagaaga.
Xasaasiyadaha kale sida kuwo cuntada laga qaado, ogow cuntada aad xasaasiyad ku qabtid iskana ilaali. La tasho dhakhtarka maqaarka(dermatologist) qaabilsan si uu kugu caawiyo ogaanshaha cuntada laga yaabo inaad xasaasiyad ku qabtid.
Waxa laga yaaba inaad Gluten xasaasiyad ku tahay, kasoo xaaran ah balse lagu daro daawooyinka qeybtood.
Sanka oo ku xirma waxu sababa in indhaha hoostooda ku modowbadaan, marka hadaad hargab kugu dhaco ka diifso oo iska ilaali in sanka ku xirmo.
Cunto wanaagsan oo caafimaad leh cun, adoo dheeli tiraya cunta qaadashadaada. Hadaad u baahantahay waxaad cuntadada la wehelisa vitamin cabna biyow kugu filan. Jirkaga isbadel wanaagsan ayaad ku arki kartaa hadaad ogaatid vitamin aad u baahantahay oo cuntada aad cunto laga helin. Dhibcaha iyo barbarka aad jirkaga ku aragtid badan waxey la xiriiran vitamin ka maqan jirkagaga ama wax xasaasi ku tahay oo aad qaadatay. Tusaale ahaan la’aanta B12 waxey sababi karta dhibco madow oo jirkaga qeybtis kasoo baxa.
Cunto khudaar iyo faakiha kugu filan siiba, kaabashka, koosto iyo khudaarta cagaarka ah.
Iska yareey cusbada aad qaadatid. Cusbada badan waxey biyo ku reebta meelo aan dabiici aheyn oo jirkaga ka mid ah, tasoo sababto barar iyo madowga indhaha hoostooda ka dhashta. Cusbada ayaa sidoo kale daciifisa wareega dhiiga ee xidida tasoo jirkaga ka dhigta mid midab kale yeesha sida baluug.
Hadaad sigaar cabtid iska jooji ama ku tasho sidaad u joojin laheyd. Cabitaanka sigaarka ayaa dhibaatoyin u geysta halbowlayasha dhiiga tasoo halis galisa noloshada.
Nasniinta ayaa baabi’isa walalka iyo cadaadiska kuwaasoo ka kaxeeya hurdada. Dheegso waxad jeceshahay si aad u dajisid acsaabtada, sida Quran ama Heeso aad jeceshahay.
Ogalaanshaha waxa aadan badali karin. Waxayaabo sababa haraaha indhaha ayaa jira oo aadan badali karin balse ogaanshahooda ay fiicantahay si aysan walwal kugu abuurin. Nasiib daro waxayaabahas ayaa ka mid ah:
Midabka maqaarka bi’inaadanka oo is badala (Pigmentation irregularities) tan ayaa sababta haraaha indhaha iyo dhibco madow oo ku dhasha jirkaga.
Qoroxda oo jirkaga ku dhacda ayaa siyaadisa isbadalka midabka jirka.
Gabowga ama weynanshaha ayaa maqaarka ka dhiga mid khafiif ah tasoo halbowlayasha iyo xidida dhiiga ay maraan noqda kuwo muuqda.
Inaad dhaxashay ayaa laga yaaba oo qoyskaga dhaxal u qabo.
Qaabka uu wajigaga u sameysanyahay siiba hadeey indhahaga god ku jiraan ama aad u soo baxsanyihin waxa laga yaaba in loo maleeyo inaad haraah leedahay, taas waxaad ku xalin karta adoo turuko si wanaagsan u marsada.
Iskaga baabi’inta si dabiici ah:
Isticmaalka waxayaabo dabiici ah ayaa ka baabi’in kara haraaha indhaha hoostooda ku dhashta. Siyaabaha ayaad ku heli karta natiijo mudo gaaban.
Laba gabal oo khiyaar/khijaar ah waxaad ku daboosha indhahaaga adoo gaarsiinaya indhaha hoostooda meesha haraaha kasoo baxay. Khijaarka ayaa jirkaga muuqiisa wanaajiya asaga bararka iyo midabaka aan dabiiciga aheyn ka baabi’inaya siiba kan ku dhashta markaad daalantahay. Indhahaga xir markaad sidan sameyneysid, adoo ku dhaafaya mudo dhan 10-15 daqiiqo.
Bacda caleenta shaaha
Waxaad kisto yar ku radisa bacda caleenta shaaha biyo qabow, markaas waxa ku duubta maro qafiif ah kadibna kor saar indhahaga sida khijaarka oo kale. Midabka caleenta shaaha ayaa dhima bararka iyo midabka uusan jirkagu laheyn. Waxa haboon inaad sameysid markaad subuxi soo kacdid, waxad calenta shaaha ku dhaafi karta furinjeerka habeenki si aad subixi u isticmaashid. Sidoo kale 10-15 daqiiqo ha saarnaato indhahaaga.
Waxaad shiida baradho ceeriin ah, markas waxad marisa meesha haraaha ka muuqdo. Ku dhaaf mudo 30 daqiiqo ah kadibna waxad iskaga dhaqda biyo qandac ah. Siyaabadan ayaa natiijo fiican ka helaan dadka qeybtood.
Iskaga baabi’inta adoo waxyabaha leysku qurxiya isticmaalaya:
Waxaad isticmaasha kareemada loogu tala galay, kasoo iska leh vitamin K. Sidaan kor ku xusnay waxyabaha sababa haraaha indhaha ayaa ka mid ah ka la’aanta vitamin K.
Waxa lagu baabi’in karaa camaliyad
Iska jooji hadey waxyaabaha kor ku xusan markaad isticmaashid jirkaga xasaasiyad ku dhaliyan ama kaa ilmeysiyaan.
Sidee La Iskaga Ilaalin Karaa Bararka Iyo Madowga Indhaha Hoostooda